Jaamacadda Hodges oo shaacisay PET Hodges Connect »Jaamacadda Hodges
Jaamacadda Hodges ayaa ku dhawaaqday Hodges Connect
Buuxinta Farqiga Shaqaalaha ee Hindisaha Tababarka Xirfadeed: Jaamacadda Hodges ayaa ku dhawaaqday Hodges Connect
Farqiga u dhexeeya xirfadaha shaqaaluhu waa wax ay ururada badan ee horumarinta ganacsiga ka wada hadlayeen sannado. Shirkaduhu waxay weydiisanayaan xalal. Jaamacadda Hodges waxay kaga jawaabaysaa wicitaankaas iyada oo la socota hindisaheeda tababarka xirfadeed, Barashada Xirfadaha iyo Tababbarka (PET), oo la yiraahdo Hodges Connect.
"Hodges Connect waxaa loogu talagalay in lagu diyaariyo shaqaalaha iyada oo la adeegsanayo xirfadaha loo-shaqeeyaha dalbaday ee lagama maarmaanka u ah in lagu guuleysto suuqyada shaqada ee maanta iyo berri," ayuu yiri Dr. John Meyer, guddoomiyaha Jaamacadda Hodges. Barnaamijkaan cusub wuxuu bixin doonaa aqoon-isweydaarsiyo, fasalo, iyo barnaamijyo loo habeyn karo si loo waafajiyo warshado kasta, loona sameeyo shaqsi ahaan ama koox kooxeed. Tani waxay ku saabsan tahay inaan shaqaalaheena siino heerkaas tartanka ah. ”
Barnaamijyadan horumarinta shaqaalaha ayaa ah dherer kaladuwan waxaana loogu talagalay inay siiyaan kaqeybgalayaashu isla markaaba xirfado ku habboon oo ay ku shaqeyn karaan maalinta xigta. Kuwani waa ka duwan yihiin barnaamijyada tacliimeed ee soo-jireenka ah ee Jaamacaddu bixiso, waxaana qaadan kara qof kasta oo xiiseynaya. Looma baahna imtixaan gelitaan hore ama khibrad kulliyadeed oo hore, ama xitaa diblooma diblooma loo baahan yahay.
Aqoon-isweydaarsigii ugu horreeyay, barnaamijka shahaadada kormeeraha Khadka Koowaad, ayaa hadda la heli karaa oo la aqbalayaa diiwaangelinta. Barnaamijka waxaa laga heli karaa labadaba aqoon isweydaarsi ku saabsan xerada Jaamacadda Hodges ama gebi ahaanba khadka tooska ah.
Marka la dhammeeyo labada noocba, qalin-jabiyayaashu waxay heli doonaan Shahaadada Kormeeraha Koowaad ee Koowaad ee Jaamacadda Hodges.
Maxay Tahay Sababta Tababarka Kormeeraha Khadka Koowaad?
"Liiska Shaqooyinka Baahida Gobolka ee 2019-2020 waxay muujineysaa baahi weyn oo loo qabo kormeerayaasha safka hore oo leh in kabadan 4,000 oo furan," ayuu yiri Dr. Meyer.
Meelaha dalbanaya kormeerayaasha safka hore waxaa ka mid ah shaqaalaha ka shaqeeya xirfadaha dhismaha iyo soo saarista, makaanikada, rakibayaasha iyo dib u hagaajiyeyaasha, iibka aan ahayn tafaariiqda, xafiiska iyo taageerada maamulka, adeegga shaqsiga ah, iibinta tafaariiqda, nadaafadda guriga, nadiifinta dhirta iyo adeegga cawska, iyo gaadiidka iyo qalabka dhaqaajinta mashiinka iyo wadayaasha gawaarida.
PET Hodges Connect Initiative waxay leedahay barnaamijyo dheeri ah iyo qorshooyin ah in si isdaba joog ah loogu daro waxyaalo cusub sida dalabka warshadaha.
Barnaamijyada kale ee jira waxaa ka mid ah Shahaadada Waxtarka Xirfadeed (PEC) - barnaamij shan koorso ah oo diiradda lagu saaray horumarinta xirfadaha jilicsan ee tikniyoolajiyadda, isgaarsiinta iyo ganacsiga - iyo. Shahaadada Shahaadada Goobta Shaqada - waa koorso gaaban oo ardayda loogu diyaarinayo layliyo, ama qof kasta oo raadinaya shaqadiisa ugu horreysa. Aqoon-isweydaarsiyada kale ee la heli karo waxaa ka mid ah farqiga u dhexeeya jiilalka goobta shaqada, ka guuridda asaagga una gudubta hoggaamiye, iyo karti-dhaqameed. Qaar ka mid ah mowduucyada aqoon isweydaarsiga waxaa ka mid ah xallinta khilaafaadka, aasaaska luuqadda jirka, noqoshada madax la jeclaan karo, dhiirigelinta shaqaalaha, caqliga shucuurta, kooxaha waxqabadka sare, amniga goobta shaqada, maareynta waqtiga, dhismaha kooxda, adeegga macaamiisha, xirfadaha abaabul iyo hoggaanka isbeddelka.
Dhinaca caafimaadka, PET Hodges Connect waxay bixisaa fasalo ku saabsan Taageerada Nolosha Aasaasiga ah, Refresher Taageerada Nolosha Aasaasiga ah, iyo Dib-u-kicinta Wadnaha iyo Gargaarka Koowaad ee Heartsaver. Qalabka Defibrillorada ee Daabacan.
Goor dhow iman doona, waxay soo bandhigeysaa aagagga teknolojiyadda, oo ay ku jiraan AUTOCAD iyo ADOBE Software.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan PET Hodges Connect, emayl HodgesConnect@Hodges.edu ama booqasho Waddooyinka.Hodges.edu/HodgesConnect.
Tags: #HodgesConnect, Tababarka, Shaqaalaha
Ku Soo Biir Daryeelkayaga Xayawaanada Iyo Qofka
Hodges U wuxuu ku hogaamiyaa wadada darajooyinka kombuyuutarka
Hodges Connect wuxuu caawiyaa Buuxinta Xirfadaha Xirfadaha Shaqaalaha
Hodges U Waxaa Loogu Magacdaray Kuwa Ugu Fiican Vets 2020